Matio 1 | DIEMDC Bible | YouVersion
Taranak’i Davida sy taranak’i Abrahama i Jesoa
(Jereo Lk 3.23-38)
1Fitanisana ny razan’i Jesoa Kristy#1.1 Fitanisana... Kristy: dkt hafa Bokin’ny tetiaran’i Jesoa Kristy. Isan’ny karazan-dahatsoratra fampiasan’ny Baiboly ny tetiarana (Jereo Gen 5; Rot 4.18-22; 1 Tan 1 snm)., taranak’i Davida, dia i Davida taranak’i Abrahama.
2I Abrahama no ray niteraka an’i Itsehàka, i Itsehàka, ray niteraka an’i Jakôba; i Jakôba, ray niteraka an’i Joda mirahalahy avy. 3I Joda, ray niteraka an’i Farèsa sy i Zara (ary dia i Tamara no renin’izy roa lahy); i Farèsa, ray niteraka an’i Hesrôna; i Hesrôna, ray niteraka an’i Arama. 4I Arama, ray niteraka an’i Haminadàba; i Haminadàba, ray niteraka an’i Nahasôna; i Nahasôna, ray niteraka an’i Salmôna. 5I Salmôna, ray niteraka an’i Bôhaza (ary dia i Rahaba no reniny); i Bôhaza, ray niteraka an’i Ôbeda (ary i Rota no reniny); i Ôbeda, ray niteraka an’i Jisay; 6i Jisay, ray niteraka an’i Davida mpanjaka.
I Davida kosa no ray niteraka an’i Salômôna (ary dia ny vadin’i Orià no reniny); 7i Salômôna, ray niteraka an’i Rehabohàma; i Rehabohàma, ray niteraka an’i Abià; i Abià, ray niteraka an’i Asà. 8I Asà, ray niteraka an’i Jôsafata; i Jôsafata, ray niteraka an’i Jôrama; i Jôrama, ray niteraka an’i Ozià. 9I Ozià, ray niteraka an’i Jôtama; i Jôtama, ray niteraka an’i Ahaza; i Ahaza, ray niteraka an’i Hezekià. 10I Hezekià, ray niteraka an’i Manase; i Manase, ray niteraka an’i Amôna; i Amôna, ray niteraka an’i Jôsià. 11I Jôsià, ray niteraka an’i Jekônià mirahalahy avy. Tamin’izany no nahababo ny vahoaka israelita tany Babilôna#1.11 Jereo 2 Mp 24.12-16.
12Taorian’ny nahababo ny vahoaka israelita tany Babilôna kosa dia izao: i Jekônià no ray niteraka an’i Sealtièla; i Sealtièla, ray niteraka an’i Zerobabèla. 13I Zerobabèla, ray niteraka an’i Abihoda; i Abihoda, ray niteraka an’i Eliakîma; i Eliakîma, ray niteraka an’i Azôra. 14I Azôra, ray niteraka an’i Sadôka; i Sadôka, ray niteraka an’i Akima; i Akima, ray niteraka an’i Elihoda. 15I Elihoda, ray niteraka an’i Eleazara; i Eleazara, ray niteraka an’i Matàna; i Matàna, ray niteraka an’i Jakôba. 16I Jakôba, ray niteraka an’i Jôsefa vadin’i Maria; ary dia i Maria no reny niteraka an’i Jesoa, ilay atao hoe Mesia.
17Koa 14 izany no isan’ny taranaka rehetra hatramin’i Abrahama ka hatramin’i Davida; 14 koa hatramin’i Davida ka hatramin’ny nahababo ny vahoaka israelita tany Babilôna ka hatramin’ny Mesia.
Zanak’i Jôsefa sady Andriamanitra miaraka amintsika i Jesoa
(Jereo Lk 2.1-7)
18Toy izao no nahaterahan’i Jesoa Kristy. Efa fofombadin’i Jôsefa i Maria renin’i Jesoa tamin’izay; raha mbola tsy niray trano anefa izy roa dia hita fa nitoe-jaza i Maria noho ny asan’ny Fanahy Masina. 19Olo-marina i Jôsefa vadiny, ka tsy te hanala baràka azy, fa nikasa hametraka azy mangingina. 20Raha mbola nieritreritra izany izy, dia nisehoan’anjelin’ny Tompo tamin’ny nofy ka nilazany hoe:
–Ry Jôsefa taranak’i Davida ô, aza matahotra ny hampakatra an’i Maria vadinao! Noho ny asan’ny Fanahy Masina tokoa no nampitoe-jaza azy. 21Ary ho tera-dahy izy ka i Jesoa no anarana hiantsoanao ny zaza: fa io zaza io no hamonjy ny vahoakany ho afaka amin’ny fahotany#1.21 Ny hoe Jesoa dia mitovy amin’ny hoe Josoa ihany ka midika hoe: Ny Tompo no famonjena (na hoe ny Tompo no manome ny famonjena)..
22Izany rehetra izany no tonga dia mba ho tanteraka ilay voalazan’ny Tompo tamin’ny alalan’ny mpaminany hoe:
23«Indro hitoe-jaza ny virijiny ka ho tera-dahy;
ary ny anarana hiantsoana ny zaza dia Himanoela#1.23 Is 7.14, voatsiahy araka ny dkt grika tranainy Septoazinta, somary nisy novan’i Matio variraiventy.,»
(izany hoe «miaraka amintsika Andriamanitra»).
24Vao nifoha maraina i Jôsefa dia nanatontosa izay nandidian’ilay anjelin’ny Tompo azy, ka nampakatra an’i Maria vadiny. 25Tsy niray tamin’i Maria i Jôsefa mandra-pahatera-dahy an’i Maria; ary i Jesoa no anarana niantsoan’i Jôsefa ny zaza.